पुस ५ यता ओलीलाई माधव नेपालका ५ झट्का – Nepal Press
पुस ५ यता ओलीलाई माधव नेपालका ५ झट्का
२०७८ जेठ १७ गते २०:२८
काठमाठौं । ५ पुस यता राजनीतिमा धेरै आरोह-अवरोह आइसके तर सत्ता राजनीति जहाँको त्यहीँ छ । त्यतिबेला पनि ‘कोर्टरुम’मा राजनीतिमाथि छलफल भइरहेको थियो अहिले पनि उही विषयमा राजनीति ‘कोर्टरुम’मै छ। तर, देशको ठूलोसत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भने ठूलो बदलाव यही बीचमा आइसकेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) टुक्रिएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनिसका छन् । एमाले पनि विभाजित भएर अर्को पार्टी बन्ने चरणमा छ ।
नेकपादेखि एमालेसम्मको विवादमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल कतै छुट्दैनन् । खासमा एमाले भित्रकै शक्ति संघर्षको विस्तार नेकपामा भएको थियो । त्यही आन्तरिक टकरावले संसद विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्म भए ।
देशको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरुलाई झड्का दिने र विपक्षीहरु तरङगित हुने क्रम जारी छ । तर, ओलीसँग टकराइरहेका माधव नेपालले पनि यसबीचमा उनलाई झड्का दिइरहेका छन् ।
संसद विघटनपछि ओलीमाथि कारवाही
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनगरि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । यसविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष विरोधमा उत्रियो । प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट मात्र होइन साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको थियो ।
विघटनविरुद्ध उनीहरुले ठूला-ठूला सभा आयोजना गरे, जहाँ नेता नेपाल ओलीविरुद्ध चर्को भाषण गर्थे ।
प्रचण्ड-माधव पक्ष संसद विघटनविरुद्ध उभिदा नेकपा भित्र ओलीविरुद्ध बहुमत पुगेको थियो । ११ फागुनमा सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेको थियो ।
विश्वासको मत नदिई ह्वीप उल्लंघन
प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ मा विश्वासको मत लिए । तर, माधव पक्षले विश्वासको मत दिएन । नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भए ।
१ सय २१ सांसद रहेका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न संख्या पुगेन । ओलीले ९३ मत मात्रै पाउँदा विपक्षमा १ सय २४ मत परेको थियो । नेपाल पक्ष समेत अनुपस्थित रहेका कारण संसदबाट ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन र उनी पदमुक्त भए ।
ओलीलाई अर्को असहयोग राष्ट्रियसभाको वागमती प्रदेशका लागि भएको उपनिर्वाचनमा भयो । उपनिर्वाचनमा एमालेको संस्थापन पक्षका उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ बने ।
अर्को तिर एमालेकै नेपाल पक्षले विपक्षी दलहरुको समेत सर्मथनमा खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनायो । एमालेको एकल बहुत हुँदाहुँदै ६ जेठमा भएको उपनिर्वाचनमा बादल पराजित भए । सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भइसकेका बादलले संसद नरहेका कारण गृहमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन सकिने अवस्था रहेन ।
एमालेले यसलाई गम्भीर अपराध भन्यो र बादललाई भोट नहाल्ने नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । कारबाही गर्न भने बाँकी छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दस्तखत
विश्वासको मत पाउन नसक्दा ओली पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन्। दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयभित्र विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन नसक्दा पुनः ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर, ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे र राष्ट्रपतिले ७६(५) अनुसार सरकारका लागि दावी गर्न आह्वान गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको सर्मथन आफूलाई भएको भन्दै १५३ सांसदको दावी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरे । उता विपक्षी नेतृत्वको गठबन्धनले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्‍यो । १४९ मध्ये एमालेको नेपाल पक्षका २६ सांसदको हस्ताक्षर थियो।
राष्ट्रपतिले दुवै दावी विश्वासायोग्य नभएको ठहर गरेपछि संसद विघटनको बाटोमा मुलुक गयो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठमा दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गरिन् ।
संसद विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विपक्षी दलका नेतालाई सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेको घटनालाई एमालले अक्ष्यम्य अपराध भन्यो र झलनाथ खनाल, नेता नेपालसहितका ११ जनालाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरि निष्काशन गर्‍यो । बाँकी १२ जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ तर कारबाही भइसकेको छैन्।
लुम्बिनीमा कांग्रेसलाई साथ
लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सोमबार भएको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार दीर्घनारायण पाण्डे विजयी भएका छन् । पाण्डे चार हजार एक सय ४० मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्काले तीन हजार छ सय १२ मत प्राप्त गरे ।
कांग्रेसका नेता पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन थियो ।
एमाले एक्लैको बहुमत नभएको भए पनि नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा लाग्दा खड्काले जित्ने सम्भावना झन कमजोर भएको थियो । यहाँ पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध मतदान गर्नेलाई एमालले कारबाही गर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ १७ गते २०:२८
4 thoughts on “पुस ५ यता ओलीलाई माधव नेपालका ५ झट्का”
जेठ ६ गते सूर्य अर्थात एमाले छोडेर कलम लिएर स्वतन्त्र भए। आज अर्थात जेठ १७ गते कलम लिएर रूख चढे। रूखको कमलो हाँगामा बसेर माझण्डहरू क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीतिमार्फत कार्यकर्तालाई अलमल्याउन खोज्दैछन्। राजनीतिमा यो खालको गद्दारी बुर्जुवाहरूले पनि गर्दैनन्।
धिक्कार छ माधब नेपाल लाई ।
नेकपाको समर्थक says:
एमाले सक्ने मुख्य ओली हो । नेकपा सक्यो ओलीले । भोट दिएको होइन हामीले नेकपालाई ? ५ बर्ष स्थायी सरकार भन्दै ? हाम्रो सपना मारेको पाप उसै जादैन साथी हो ।
१५ बर्ष महासचिव भएर पनि सत्ताको भोक मेटिएन माधव नेपाललाई । डुवाउने भए विधि पद्दतिवालाहरुले विपक्षीको गोटी बनेर ।